DEG-DEG: Waqtiga Iyo Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Ku Bilaabmi Doono Horyaalka LaLiga Oo La Shaaciyey | Kaafi News
DEG-DEG: Waqtiga Iyo Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Ku Bilaabmi Doono Horyaalka LaLiga Oo La Shaaciyey
May 22, 2020 - Written by admin
Horyaalka kubadda cagta waddanka Spain ayaa ugu dambayn soo laaban doona maalin Jimce ah oo ay taariikhdu tahay June 12, waxaana xilligaas kulankii ugu horreeyey ay taageereyaashu nasiib u yeelan doonaan inay ka daawadaan telefishannada.
LaLiga oo ay ka hadhsan yihiin 11 ciyaarood ayaa waxa la bilaabi doonaa usbuuca labaad ee bisha June, waxaana toddobaad walba ay kooxuhu yeelan doonaan laba kulan.
Xeer ilaaliyaha waddanka Spain ayaa ansixiyey in Jimceyaasha iyo Isniinaha ay kooxuhu si caadi ah u ciyaari karaan, waxaanay taasi siinaysaa maamulka LaLiga inay ka badbaadaan caqabad dhinaca sharciga ah oo ay ku mutaysan karayeen in maxkamadda lala tiigsado.
Horyaalka oo hakad galay horraanta bishii March, ayaa kooxaha loo ogolaaday inay tababar buuxa sameeyaan, waxaanay ciyaartoydu iskugu yimaaddeen garoomada laylinta iyagoo xaran-raxan u jimicsaday, sidoo kalena tababarka caadiga ah u qaatay laga soo bilaabo Axaddii.
Garoonka Estadio Ramon Snachez Pizjuan ayay ciyaarta ugu horreysa ee horyaalka LaLiga ka dhici doontaa habeenka Sabtidu soo gelayso ee June 12, waxaana isku haleeli doona labada kooxood ee Sevilla iyo Real Betis.
Sida ay sheegtay idaacadda COPE, gaar ahaanna ay ku daabacday barteeda Twitter-ka, ciyaartan ayaa si rasmi ah uu horyaalku ugu bilaaban doonaa.
Macluumaad ay heshay Idaacaddu ayay ku sheegtay inay u xaqiijiyeen in jadwalka oo dhamaystiran lagu dhawaaqi doono 28-ka May, hase yeeshee ay haddaba sii ogaadeen in Sevilla vs Real Betis ay tahay ciyaarta ugu horreysa.
Madaxweynaha horyaalka LaLiga ee Javier Tebas ayaa shaacin doona waqtiga horyaalka kulamadiisa ugu horreeyaa ay dhici doonaan, waxaanu u gudbin doonaa Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Spain ee RFEF oo ansixin doona.
Si kastaba, horyaalka waddanka Spain ayaa la filayaa inuu noqdo midka labaad ee Yurub ah ee lagu soo laabto, iyadoo usbuucan laga ciyaaray waddanka Jarmalka oo uu noqday horyaalkii weynaa ee ugu horreeyey ee la ciyaaro tan iyo markii caabuqa Korona albaabada loogu laabay garoomada.